Uvimba we-Upper Deck Stunning otshintshiweyo. - I-Airbnb
Uvimba we-Upper Deck Stunning otshintshiweyo.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguLou
Indawo ethe kratya esandula ukuguqulwa ebanzi kwiBarn (iDekhi ePhezulu) yeegadi ze-Lower Kerse iseti kwiihektare ezingama-30 zeegadi ezintle, ezizolileyo, iinkuni kunye namasimi kunye nemizuzu emi-5 kuphela ukusuka kumanxweme asekhaya anjengeSouth Milton Sands, ulwandle oluselunxwemeni-Bantham, ilali. ii-pubs, iindawo zokutyela zaselwandle, uhambo oluselunxwemeni, intenetya kunye neeklabhu zegalufa. I-Upperdeck isanda kunikwa i-WiFi yasimahla.
Umgangatho oPhezulu ngumgangatho osandula ukuguqulwa kwaye unikwe umgangatho ongaphezulu weplani entsha ye-oki evulekileyo (40ft x 14ft).Inendlu yangasese eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo elineesitya zezandla kuzo zombini. Sinikezela ngelinen ehlanjululweyo yobuchwephesha, iitawuli ezintsha kunye neetawuli zaselwandle.Kwakhona, ekusebenziseni kwakho iirakethi zentenetya kunye neebhola zenkundla yentenetya onokuthi uyisebenzise nangaliphi na ixesha.
Kunye neegadi ezimangalisayo nezibanzi.
Ibhedi eyongezelelekileyo imnandi kakhulu.
Siyakwamkela kwakhona izinja ngentlawulo eyongezelelweyo ye-£ 20 ukuba ishiywe kwimvulophu kwisifuba somthi.
4.89 · Izimvo eziyi-360
Umgangatho oPhezulu ukwimeko eyodwa. Ikwindawo echongiweyo enobuhle bendalo obubalaseleyo engqongwe ziigadi ezintle.Siyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka kumbindi weLali yaseThurlestone kwintlambo efihlakeleyo, enoxolo enembono zolwandle ukusuka egadini.I-Thurlestone yilali entle efulelwe ngengca ene-pub egqwesileyo, iklabhu yegalufa / yetenisi. Ngaphezulu kweelwandle ezi-4 eThurlestone yodwa kunye nolwandle lwaseBantham, edume ngesikolo sayo sokusefa kunye ne-surf yimizuzu eli-10 kuphela ukusuka kumnyango wakho wangaphambili.Kwakhona, idumile kwi-kite surfing kunye nokusefa emoyeni. Ulwandle lwaseBantham lukwabonelela ngokugqwesa iStand Up Paddle ezantsi kuMlambo iAvon entle.Ukuqeshwa kweebhodi zePaddle kunokucwangciswa ngaphambi kokufika. I-Salcombe, i-15 mins kude kunye ne-Kingsbridge phantsi kwe-10.Sihlanganise incwadi eluncedo kunye nazo zonke iindawo zokutyela esizithandayo, iikhefi, izikolo zokuhamba ngeenqanawa njl.njl.....
Umbuki zindwendwe ngu- Lou
Ndihlala e cottage nosapho lwam kwaye abazali bam bahlala kwindlu enkulu.Sihlale apha iminyaka engaphezu kwama-40 ngoko ke siyazi kakuhle indawo kunye neendawo zayo ezikhethekileyo. Siyavuya kuphela ukukunceda kwaye sikucebise ukuba kuyimfuneko.
Ndihlala e cottage nosapho lwam kwaye abazali bam bahlala kwindlu enkulu.Sihlale apha iminyaka engaphezu kwama-40 ngoko ke siyazi kakuhle indawo kunye neendawo zayo ezikhethekileyo…